Prototype na-arụ ọrụ | Na-arụ ọrụ Prototype - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
Ngwa / Ule oru
Ọrụ prototyping tupu uka mmepụta na-enye aka mpikota onu oge gị na-eri na-eweta ọhụrụ ngwaahịa n'ahịa, n'ụzọ zuru okè kenha gị imewe na n'ụzọ ziri ezi na-anọchi gị ọgwụgwụ-ngwaahịa ụdị, dabara na ọrụ.
Mepụta ihe nlere anya na ịmepụta ezigbo ihe ngosi ọrụ - n'agbanyeghị agbanyeghị ọrụ gị siri ike, anyị nwere azịza maka gị.
Nwaleenụ gị Design maka Fitdị Fit & Function
Kedu ihe bụ ihe eji arụ ọrụ?
Ka imewe gị na-aga n’ihu, ị ga-enweta ngwa ngwa na-arụ ọrụ ngwa ngwa yana njirimara nke ime maka ụdị ngwongwo dabara nke ọma na nnwale arụmọrụ, nke na-enyere aka nyochaa imewe, akụrụngwa, ike, nnabata, nzukọ, usoro ọrụ na imepụta ihe.
Ihe ngosi ọrụ nwere ike inyere aka gosipụta ma mezue imewe gị na nlele nyocha siri ike. N'iji ihe eji eme ihe eji eme ihe na injinia na uzo di iche iche, i gha ekpughe otu ahia gi si eme tupu ahia ahia.
N'ezie, ịrụ ọrụ ma ọ bụ ịrụ ọrụ prototypes bụ ihe dị mkpa ma bụrụ nke a ga-ewere dị ka akụkụ dị mkpa n'oge usoro Ntinye Ọhụrụ (NPI). A na-ele ya anya dị ka "amụma mkpuchi" tupu itinye aka na ọnụahịa dị oke ọnụ.
Ihe ngosi nke na-arụ ọrụ nke kwekọrọ na ngwaahịa ikpeazụ
N'iji otu ihe dika ihe ikpeazu, megharia oru oru, nguzogide kemikal, ihe omuma nke ihe eji eme ihe.
Mepụta ihe mgbagwoju anya dị iche iche nke usoro ọrụ iji chọpụta ụdị ma dabara, ma hụ na akụkụ niile dabara na mgbakọ.
Mepụta ihe ngosi zuru oke na-arụ ọrụ iji tụọ, tụnyere, ma ọ bụ lelee njehie imewe, ọdịiche dị iche na nnabata nnabata.
Ihe ngosi anya na-arụ ọrụ na-akwado nnyocha nyocha nke photometric, gụnyere ntinye anya, ntinye ntụgharị na transmittance, wdg.
Iji tinye-tinye, ndụ hinges, ma ọ bụ overmolds iji dsomie ọrụ nke ngwaahịa na ikpokọta ndị a anwale n'ime a ọtọ prototype na-agba ọsọ dị ka a ikpeazụ ngwaahịa.
Iwuli prototypes nke ụlọ bụkwa ụzọ dị mma iji nwalee ngwa ngwa, ederede na mmetụta nke ihe dị iche na ngwaahịa ikpeazụ gị.
Nweta wardsgwọ Ọrụ site na Nlekọta Ọrụ
Tupu imepụta oke, ọ dị mkpa ịmepụta ụdị ọrụ iji hụ na imewe gị na-ezute atụmanya gị, nrụpụta na ụkpụrụ ụlọ ọrụ.
Ule nyocha ihe eji eme ihe ma mezie arụmọrụ gị.
Nụchaa ma mezue ngwaahịa gị ka ị nwee ike iji obi ike gaa na nrụpụta zuru oke.
Gwa ndi ozo n’echiche ihe osiso; gosiputara uru nke echiche nye ndi nwere ego na ndi ahia.
Kwe ka a chọpụta ma dozie nsogbu ọ bụla tupu ịmalite itinye ngwa ọrụ na-akwụ ụgwọ dị oke ọnụ.
Gbaa mbọ hụ na enwere ike nrụpụta ọrụ; mee ka ngwa ahia gi gha ahia ahia ngwa ngwa na onu ahia.
Na-eji Usoro Ntugharị Nri Ziri Ezi iji ulateomi Mmepụta
Iji Ike Anyị niile hụ na ihe ịga nke ọma n’ọrụ gị
CreateProto na-eji ọtụtụ teknụzụ na ihe ndị ejikọtara na usoro ọdịnala iji mepụta ụdị ọrụ zuru oke na nke zuru ezu. Na CreateProto, anyị na-enye ọtụtụ usoro mmepe ngwaahịa iji nyere ndị na-emepụta ihe, ndị injinia na ndị nrụpụta aka ịzụlite ma nyochaa ngwaahịa ọhụrụ ngwa ngwa, akụ na ụba yana n'ihe egwu dị ala.
Na elu ngwa ngwa prototyping technology, anyị nwere ike gbanwee gị imewe n'ime eziokwu na dị nnọọ ole na ole ụbọchị. Ga - enweta ndụmọdụ ọkachamara ga - adabara gị na mkpa gị, ma ọ bụ n'ụdị nnwale, dabara ma rụọ ọrụ, ma ọ bụ dịka mmalite maka ọrụ nrụpụta anyị ọ bụla. Nke a ga - enyere aka inweta data dị elu na arụmọrụ gị ma weta obi ike asambodo.
Dị ka ọkachamara ọkachamara na-emepụta ihe, CreateProto lekwasịrị anya na mmepụta prototyping ogologo oge ma nweta ezigbo aha na akụkụ ọrụ. Anyị nwere ike ịnye gị prototypes na-eju afọ arụpụtara n'ụzọ kachasị mma maka CNC machining, nkedo agụụ ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa na ebu aluminom.
CNC machining a na-eji na n'ichepụta ọtọ prototypes na mmepụta akụkụ, mkpa maka ngwaahịa mmepe na injinịa. Ọ bụ usoro nke "mbelata nrụpụta ọrụ", ịnabata ihe igwe eji arụ ọrụ na igwe eji arụ ọrụ iji mepụta mpempe igwe ma ọ bụ plastik site n'iwepụ ihe na egwe ọka, ịtụgharị ma ọ bụ egweri nke kọmputa na-achịkwa. Usoro ọdịnala a na-ewepụta ike dị elu na njedebe karịa teknụzụ ọ bụla ọzọ.
CNC machining na-enye ọtụtụ nhọrọ nchịkọta nhọrọ nke injinia, na-ekwe ka ụdị ọrụ na-arụ ọrụ iji nweta ihe onwunwe achọrọ ma na-ahụkwa oke nha ihu ọma. Yabụ, nke a bụ ụzọ kachasị mma iji nwalee ụdị nke ụdị dabara adaba yana ọrụ.
Urethane agụụ Nkedo
Agụụ casting a na-ejikarị maka arụmọrụ prototypes mmepụta na obere usoro (10 ka 50 mbipụta). N'ozuzu, a na-eji ebu silicone mee ihe na-eji ebu ma jiri akụkụ CNC ma ọ bụ SLA dị ka ụkpụrụ nnabata. Ebu ndị a na-eme ka ihe ederede na ederede mejupụta ma na-enye ha ngwụcha site na otu akụkụ ruo na-esote.
Otu polyurethanes dị iche iche nwere njirimara dị iche iche na-enyere ndị prototypes aka na nyocha ọrụ n'okpuru ọnọdụ dị iche iche gụnyere ibu ọrụ igwe, ibu ọkụ na nnwale ndị ọzọ nwere ntụkwasị obi. I nwekwara ike nweta nsonaazụ mmepụta dịka agba, agba, imecha ya, na mmetụta dị nro. Ọ bụ ngwa ngwa na-eke omenala na mgbagwoju obere ogbe mmepụta akụkụ karịa na omenala Ebu na injection ịkpụzi, na ọ ga-mma gị arụmọrụ na-emepe emepe.
Ngwa ngwa ngwa na aluminium
Ngwa ngwa ngwa aluminom bu uzo ngwangwa na ugwo onu ahia nke plastik; ọ nwere ike ọ bụghị naanị imepụta ọtụtụ narị nyocha ọrụ arụmọrụ dị nso na ngwaahịa ikpeazụ, mana ọ na-enyekwa ihe achọrọ maka akụkụ njedebe maka nrụpụta obere olu.
Injectionkpụzi nkedo ngwa ngwa na-enye nhọrọ ka mma maka ndị ahịa ahụ chọrọ akụkụ nnwale dị ala. N'otu oge ahụ, ọ ga-enwe ike idozi ọdịiche dị n'etiti prototype na mmepụta, nweta arụmọrụ gị na ụdị dabara adaba ngwa ngwa, nye gị ohere igosi ndị ahịa nwere ike rụchaa ngwaahịa, ma hapụ ka esemokwu ọ bụla chọpụta ma mezie nke ọma. tupu ha ebufee n'ichepụta ihe.
Ngwa ngwa ngwa na-abụkarị ihe dị ọnụ ala karịa nrụpụta nrụpụta n'ihi ọsịsọ na-ewu ụlọ na obere oge okirikiri, yabụ mgbanwe mgbanwe mgbanwe anaghị adịkarị ọnụ.
Otito Prototyping, Fast Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, CNC Prototyping, CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing,